Madaxweynaha Somaliya oo ka Xumaaday Fargalinta Kenya – Rasaasa News
Madaxweynaha Somaliya Shariif Sheekh Axmed ayay ku qaadatay todobaad in uu jawaabo u helo ciidama Kenya ee soo galay gabalada Koonfur Galbeed dalka Somaliya oo ay xoog ku haystaan Ururka Al shabaab.
Dawlada Kenya ayaa hore u sheegtay in galida Somaliya ay raali ka tahay dawlada Somaliya, sidaasina ay ku galeen gabalka Jubada hoose, laakiin hadalkan ka soo yeedhay madaxweynaha Somaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashada Kenya.
Dhawaan ayey si deg deg ah wafti Kenyan ah ku tageen Muqdisho iyaga oo wada hadal la qaatay madaxweynaha iyo R/wasaaraha Somaliya, ka dibna waxay waftigu u kicitintay dhinaca Addis Abab oo ay kaga qayb galeen shir deg deg ah oo ay IGAD ku ansixinayso galitaanka Kenya dalka Somaliya.
Aqoonyahanada Somalida ayaa si xoog leh uga hadlay galitaanka Kenya ee dalka Somaliya, iyaga oo ku cel celiyey in ay sharci daro tahay arintaas.
Somaliya waxaa si xoog ah ku haysta ururka Al shabaab oo ka mid ah arggagixisada caalamiga ah. Dawlada taagta daran ee Somaliya ayaa ku taagan gacmaha aduunka, waxaana Somaliya jooga 9,000 oo ciidamo Afikan ah, oo maalin walba ku dhinta dalka Somaliya.
Hadalkan todobaad ka dib ka soo yeedhay madaxweynaha Somaliya ayaa ah mid ay aad ula yaabi doonaan madaxda caalmalka oo madaxweynaha laftigiisa gacanta ku sameeyey kuna haya kursiga.
Dayaaradaha dagaalka ee dalka Maraykanka ayaa todobaad walba waxay hawda ka garaacaan meelo ka mid ah dalka Somaliya meelaha ay ku tuhmaan in ay joogaan Al shabaab.
Hadalka Madaxweynaha ayaa u egg mid siyaasadaysan oo xukun ilaashi ku salaysan, maadaama hadii ay Somaliya nabadi ka dhacdo la galayo doorsho bilo gudahaood. Isweydiin ayey leedahay sababta uu madaxweynuhu u ogol yahay in la soo galo hawda Somaliya ee uu u diidan yahay in lug lagu soo galo.
Jwxo-shiil, oo Xusuus La,aan Darteed Waraysi Bixin Waayey!